गर्छ पर्थ छ पोकर मिसिन
कुरा समय.एक लस भेगास आधारित खेल कम्पनी फेला नै अगाडि र केन्द्र को एक समयमा शेयर बजार गरेको सोची दिन मा रेकर्ड छ । अधिकारीहरु देखि Everi होल्डिंग्स, को पुन: नामाकरण वैश्विक नगद पहुँच, आमन्त्रित थिए घन्टी खोल्ने घण्टी व्यापार लागि सोमवार मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज । सोमबार पहिलो दिन थियो कम्पनी थियो कारोबार अन्तर्गत आफ्नो नयाँ प्रतीक, EVRI.क्षण पछि Everi सीईओ राम Chary घण्टी बज्यो घण्टी, डाउ tumbled लगभग 1,100 points गर्छ पर्थ छ पोकर मिसिन.
By दिन को अन्त थियो बजार rebounded केहि संग, डाउ तल बन्द 588 अंक छ । शायद खोल्ने घण्टी घण्टी दिइरहेको थियो केही लाभ छ । Everi को एक थियो भनेर केही कम्पनीहरु वास्तवमा माथि बन्द सोमवार, खत्म मा $4.94 को एक वृद्धि, 8 सेन्ट वा 1.65 प्रतिशत छ । नाम परिवर्तन दूर देखि वैश्विक नगद पहुँच र नयाँ ब्रान्डिङ संकेत कम्पनीको संक्रमण देखि प्रदान यो खेल उद्योग संग, अधिक बस भुक्तान संसाधन उपकरण । Everi किनेको स्लट मिसिन निर्माता मल्टिमिडिया खेल लागि गत वर्ष $1.2 अर्ब छ । Chary सामेल थियो मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज पोडियम द्वारा एक दर्जन Everi अधिकारीहरु । "हामी redefining हाम्रो संगठन निम्न हाम्रो सफल संक्रमण गर्न एक पूर्ण-सेवा क्यासिनो खेल उपकरण र भुक्तानी समाधान प्रदायक," Chary एक वक्तव्य मा भने । शेयर को सबैभन्दा लस भेगास आधारित खेल कम्पनीहरु, बाहेक सम्राट्हरू मनोरंजन कर्प, भोगे बाँकी संग, बजार कैसिनो अपरेटर गरेको शेयर मा बन्द $8.97, माथि 95 सेन्ट वा 11.85 प्रतिशत, निम्न एक शुक्रवार रात घोषणा कम्पनी पुगेको थियो, एक सम्झौता संग यसको शीर्ष बैंक उधारदाताओं भन्दा पुनर्गठन मामला लागि, यसको सबै भन्दा ठूलो सञ्चालन विभाजन । सम्राट्हरू गर्न आशाहरू ट्रिम लगभग $10 अर्ब को ऋण पुनर्गठन माध्यम को सम्राट्हरू मनोरंजन सञ्चालन, कं, थियो जो मा राखिएको अध्याय 11 दिवालियापन जनवरी मा.पनि सप्ताह भन्दा, रायटर्स रिपोर्ट कि Caesars बसे शुल्क को विरोधी-पैसा laundering lapses मा सीजर्स पैलेस न्याय विभाग संग र U गर्छ फिलाडेल्फिया एक क्यासिनो. कोषको गरेको वित्तीय अपराधको प्रवर्तन नेटवर्क तिर्न सहमत, एक दण्ड को $20 लाख छ । नेवादा खेल नियन्त्रण बोर्ड गर्न पार्टी सम्झौता छ । सम्राट्हरू अस्वीकृत टिप्पणी, सोमवार.मई मा, Caesars भने जमानत दाखिला थियो भन्ने चर्चा मा संग FinCen बसोबास गर्न allegations र सामना एक असल बीच को $12 लाख र $20 लाख छ । शेयर बजार volatility मा, यो संयुक्त राज्य अमेरिका देखि stemmed डर बारेमा चिनियाँ economy गर्छ पेंसिल्वेनिया कर जुवा जीत. By समय बजार खुलेको सोमबार, चिनियाँ शेयर बजार रिपोर्ट थियो यसको खराब गिरावट देखि 2007 गर्छ पर्थ एक क्यासिनो. क्यासिनो संग कम्पनीहरु ठूलो होल्डिंग्स मा मकाउ लाग्यो दवाब देखि लगानीकर्ताले । लस भेगास बालुवा कर्प, अस्वीकृत $1.94, वा 4.04 प्रतिशत मा बन्द गर्न, $46.05 मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज । Wynn Resorts लिमिटेड.बन्द मा $76.48, तल $5.29, वा 6.47 प्रतिशत, Nasdaq मा.कम्पनीहरु सञ्चालन धेरै मकाउ मा क्यासिनो, जो अनुभव छ 14 सीधा को महिना गिरावट मा खेल राजस्व.
MGM Resorts अन्तर्राष्ट्रिय संचालित जो एक मकाउ कैसिनो देखे, यसको शेयर मूल्य गिर $1.05 वा 5.10 प्रतिशत मा बन्द गर्न $19.54 मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज । अन्य खेल शेयर भोगे पनि । Boyd खेल कर्प मा बन्द $15.50, तल 53 सेन्ट वा 3.31 प्रतिशत, मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, र पेन राष्ट्रिय खेल बन्द मा $17.24, तल 45 सेन्ट वा 2.55 प्रतिशत, Nasdaq मा.सराय र स्लट मार्ग अपरेटर सुनको मनोरञ्जन प्रवृत्ति bucked र बन्द मा $8.80, माथि3सेन्ट, वा 0.34 प्रतिशत, Nasdaq मा.गेमिंग उद्योग गरेको दुई सबै भन्दा ठूलो स्लट मिसिन निर्माता पनि अनुभव शेयर बजार गिरावट.अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रविधि परे 89 सेन्ट वा 5.23 प्रतिशत मा बन्द गर्न, $16.13 मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज । वैज्ञानिक खेल कर्प, पतन 73 सेन्ट, वा 6.84 प्रतिशत, मा Nasdaq मा बन्द गर्न $9.94. यसअघि दिन मा, Janney मांटगोमेरी स्कट खेल विश्लेषक ब्रायन म्याकगिल लगानीकर्ताले भन्नुभयो वैज्ञानिक खेल भइरहेको छ लागि चुनौती बजार शेयर गरेर साना कम्पनीहरु रूपमा यो काम गर्दछ, माध्यम यस वर्ष गरेको $5.1 अर्ब buyout यस वर्ष को Bally प्रविधिहरू । म्याकगिल भने लगानीकर्ताले एक "अनन्त obsession" "संग synergies" (लागत काटन प्रयास) संग मर्ज कम्पनी हो । "बीचमा चासो उद्योग सम्पर्क छ कि जबकि, वैज्ञानिक खेल जारी छ पाउन 'synergies,' बाँकी उद्योग वास्तवमा छ अधिक खर्च," म्याकगिल भन्नुभयो । "प्रतियोगिहरु जस्तै Aristocrat, त, Everi, Konami र साना निर्माताहरु माथि ramping अनुसन्धान र विकास हो।" मास्टर घर मा समय स्लट.
ब्लेक जेक को मास्टर 90 दिन मंगेतर
भाग्यशाली हाँस स्लट मिसिन अनलाइन
कहाँ छ मेगा स्टार क्यासिनो
गर्छ फिनिक्स एक क्यासिनो
कोठा चोक्ट क्यासिनो durant ठीक
कहाँ छ meropa क्यासिनो स्थित
What is the best मस्यौदा स्लट लागि कल्पना फुटबल
कहाँ क्यासिनो मा पश्चिम भर्जिनिया
त्यहाँ के के मा क्यासिनो nsw
क्यू स्लाट्स र संकेत काम छैन
भाग्यशाली हाँस स्लट मिसिन रणनीति
गर्छ फिलाडेल्फिया एक क्यासिनो
गर्छ पेंसिल्वेनिया कर जुवा जीत
गर्छ पर्थ एक क्यासिनो
मास्टर घर मा समय स्लट